आइतबार जुलाई 4, 2021 |
आइतबार जुलाई 4, 2021
विषय — विषय- भगवान
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: भजनसंग्रह 19 : 1
“"स्वर्गले परमेश्वरको महिमाको विषयमा बोल्छ। आकाश-मण्डले उहाँका हातबाट बनिएका राम्रा-राम्रा कुराहरूका विषयमा भन्दछ।"”
उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 18 : 30-35
30 परमेश्वरको शक्ति पूर्ण छ। उहाँको वचन प्रमाणित भएको छ। उहाँ आफूमाथि भरोसा गर्ने मानिसहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ।
31 त्यहाँ परमप्रभु बाहेक अरू कुनै परमेश्वर छैन, त्यहाँ परमेश्वर छोडेर अर्को चट्टान छैन।
32 परमेश्वर मलाई शक्ति प्रदान गर्नु हुन्छ। उहाँले मलाई चोखो जीवन जिउन सहायता गर्नुहुन्छ।
33 परमेश्वरले मलाई मृग जस्तो चाँडो दगुर्न सक्ने क्षमता दिनुहुन्छ। उहाँले सर्वोच्च ठाउँहरूमा मलाई दृढ भई उभिने बनाउनु हुन्छ।
34 परमेश्वरले मलाई युद्ध-कौशलता सिकाउनु हुन्छ। यसकारण मेरा पाखुराहरू बलिया धनुबाट काँडहरू हान्न योग्यको हुनेछ।
35 परमेश्वर तपाईंले रक्षा गर्नुभयो र मलाई जित्नमा सघाउनु भयो। तपाईंको दाहिने पाखुराले मलाई सघाउनु भयो। तपाईंले शत्रुलाई परास्त गर्नमा सघाउनु भयो।
1. यशैया 61: 10, 11
2.2शमूएल 22 : 1 (दाऊदल)-7, 14-22
3. यशैया 12 : 2-6
2 परमेश्वरले मलाई बचाउनु हुन्छ। म उहाँमाथि भरोसा गर्दछु। म डराउने छैन्। परमप्रभु परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई बचाउनु हुन्छ। अनि म उहाँको महिमाको गुणगान गर्नेछु।
3 तिमीहरूले उद्धारको इनारबाट पानी लेऊ। तब तिमीहरू आनन्दित हुनेछौ।
4 त्यसपछि तिमीहरू भन्नेछौ, परमप्रभुको प्रशंसा गर! उहाँको नाउँमा आराधना गर! उहाँले गर्नु भएका कामहरूको बारेमा सबै मानिसहरूलाई भन! र उहाँको नाउँ उच्च पारिएको छ भनी घोषणा गर।
5 परमप्रभुको बारेमा स्तुतिका गीतहरू गाऊ। किन? किनभने उहाँले महान कार्यहरू गर्नु भएकोछ! परमेश्वरको बारेमा सारा संसारै भरि सुसमाचार फैलाऊ। यी कुराहरू प्रत्येक मानिसहरूले जान्न पाउन्।
6 हे सियोनका मानिसहरू हो, यी कुराहरूका बारेमा चिच्याऊ! इस्राएलका परमपवित्र परमेश्वर तिमीहरूका बीचमा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। त्यसैले आनन्दित हौऊ!
4. 1 इतिहास 14 : 8 (कहिले)-17
8 ... पलिश्ती मानिसहरूले सुने कि दाऊद इस्राएलका राजा चुनिएकाछन्। यसर्थ सबै पलिश्ती मानिसहरू दाऊदको खोजिमा गए। दाऊदले यस विषयमा सुने। तब तिनी पलिश्ती मानिसहरूसित युद्ध गर्न निक्ले।
9 पलिश्ती मानिसहरूले रपाईमको बेंसीमा बस्ने मानिसहरू माथि आक्रमण गरे अनि तिनीहरूका सर सामानहरू चोरे।
10 दाऊदले परमेश्वरलाई सोधे, के म जाऊँ अनि पलिश्ती मानिसहरूसित युद्ध गुरू? के मलाई तपाईले उनीहरूलाई परास्त गर्नु दिनुहुन्छ? परमप्रभुले दाऊदलाई उत्तर दिनु भयो, जाउ, म तिमीलाई ती पलिश्ती मानिसहरु माथि बिजय गराउनेछु।
11 तब दाऊद र तिनका मानिसहरू बाल पराजीम शहरसम्म गए। त्यहाँ दाऊद अनि तिनका मानिसहरूले पलिश्ती मानिसहरूलाई परास्त गरे। दाऊदले भने, भत्केको बाँधबाट पानी छुट्छ। त्यही प्रकारले परमेश्वरले मेरो शत्रुहरू माथि छुट्नु भयो। परमेश्वरले मेरो माध्यमबाट यसो गर्नुभयो। त्यसै कारणले त्यस स्थानको नाउँ बाल-पराजीम राखिएको हो।
12 पलिश्ती मानिसहरूले बाल पराजीममा आफ्ना मूर्तिहरू छाडेका थिए। दाऊदले आफ्ना मानिसहरू ती मूर्तिहरूलाई जलाउने आदेश दिए।
13 पलिश्तीहरूले रपाईमको बेंसीमा बस्ने मानिसहरू माथी फेरि आक्रमण गरे।
14 दाऊदले फेरी परमेश्वरसित प्रार्थना गरे। परमेश्वरले दाऊदको प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो। परमेश्वरले भन्नु भयो, दाऊद, जब तँ आक्रमण गर्दा पलिश्तीहरूको पछि पहाड तिर नलाग। त्यसको साटो तिनीहरूको चारै तिर जा अनि पीपलका रूखहरूका पहाड पट्टी लुक।
15 अनि त्यस समयमा तिमीले किम्बूको टुप्पोहरूबाट हिडीरहेको आवाज सुन्ने छौ। तब तिमीले पलिश्तीहरू माथि आक्रमण गर्नु नै पर्छ। तिमीले यसो अवश्यै गर्नु पर्छ। परमेश्वर आफैं तिमीहरूका अघि अघि पलिश्तीका सेनाहरूलाई प्रहार गर्न जानुहुनेछ।
16 दाऊदले त्यसै गरे जो परमेश्वरले तिनलाई गर्नु भन्नुभएको थियो। यसरी दाऊद अनि तिनका मानिसहरूले पलिश्ती सेनालाई परास्त गरे। तिनीहरूले गिबोन शहरदेखि गेजेर शहर सम्मका सबै पलिश्ती सेनालाई परास्त गरे। तिनीहरूले गिबोन शहरदेखि गेजेर शहर सम्मका सबै पलिश्ती सेनाहरूलाई मारे।
17 यसरी दाऊद सबै देशहरूमा प्रसिद्ध भए। परमप्रभुले सबै राष्ट्रहरूलाई दाऊददेखी भयभीत तुल्‌याउनु भयो।
5. प्रकाश 21 :2(म)-7
3 मैले सिंहासनबाट आएको ठूलो आवाज सुनें। त्यो आवाजले भन्यो, अब परमेश्वरको भवन मानिसहरुसंग छ. उनी तिनीहरुसंग रहेनछन्। तिनीहरु उनका मानिसहरु हुनेछन्। परमेश्वर स्वयं तिनीहरुसित हुनेछन् अनि तिनीहरुका परमेश्वर बन्नेछन्।
4 परमेश्वरले तिनीहरुको आखाँबाट जम्मै आँसु पुछ्नु हुनेछ। अब उसो त्यहाँ मृत्यु, शोक, रोदन वा पीडा केही हुने छैन। सबै पुरानो वस्तुहरु बितेर गए।
5 उनी एक जो सिंहासनमा थिए उहाँले भन्नुभयो, हेर! अहिले म हरेक कुरालाई नयाँ तुल्याउँदैछु। तब उहाँले भन्नुभयो, यसलाई लेख, किनभने यी वचनहरु विश्वासयोग्य अनि सत्य छन्।
6 उहाँ जो सिंहासनमा हुनुहुनथ्यो उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब सिद्धियो म नै अल्फा अनि ओमेगा, आदि अनि अन्त हुँ। म कुनै पनि मानिस जो तिर्खाएको छ उसलाई जीवनका पानीको फुहराबाट सित्तैमा दिनेछु।
1. 472: 24 (सबै)-26
सबै वास्तविकता परमेश्वर र उहाँको सृष्टिमा छ, सामञ्जस्यपूर्ण र अनन्त। उहाँ जे सृजानुहुन्छ त्यो उत्तम छ, र सबै कुरा बनाउनुहुन्छ।
प्रश्न — भगवान के हो?
उत्तर — भगवान अनौपचारिक, दिव्य, सर्वोच्च, अनन्त दिमाग, आत्मा, आत्मा, सिद्धान्त, जीवन, सत्य, प्रेम हो।
प्रश्न — के यी सर्तहरू पर्यायवाची छन्?
उत्तर — उनीहरु। तिनीहरूले एक परम ईश्वरलाई जनाउँछन्। तिनीहरू पनि ईश्वरको प्रकृति, सार, र सम्पूर्णता व्यक्त गर्नका लागि हुन्। भगवानका विशेषताहरू न्याय, कृपा, बुद्धिमता, भलाइ, र त्यस्तै हो।
प्रश्न — के त्यहाँ एक भन्दा बढी ईश्वर वा सिद्धान्त छन्?
उत्तर — त्यहाँ छैन। सिद्धान्त र यसको विचार एक हो, र यो एक परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, र सर्वव्यापी प्राणी हो, र उहाँ प्रतिबिम्बित मानिस र ब्रह्माण्ड हो।
ईश्वरीय मेटाफिजिक्सले आध्यात्मिक ज्ञानलाई प्रकट गरेझैं स्पष्ट रूपमा देखाउँदछ कि सबै दिमाग हो, र त्यो दिमाग ईश्वर हो, सर्वशक्तिमानता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञता - अर्थात्, सबै शक्ति, सबै उपस्थिति, सबै विज्ञान। यसैले सबै वास्तविकतामा दिमागको अभिव्यक्ति हो।
हामी सर्वशक्तिमानताको उच्च संकेत गुमाउँछौं, जब परमेश्वर, वा भलाइ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ र सबै शक्ति छ भन्ने कुरा स्वीकार गरे पछि पनि हामी विश्वास गर्छौं कि दुष्ट नामको अर्को शक्ति छ। एक भन्दा बढि दिमाग रहेको यो विश्वास ईश्वरीय ईश्वरशास्त्रमा त्यति नै हानिकारक छ जस्तो पुरानो पौराणिक कथा र मूर्तिपूजक मूर्तिपूजा हो। एक जना बुबासँग, परमेश्वरसमेत, मानिसका सारा परिवार दाजुभाइ हुन्थ्यो। र एक दिमाग र परमेश्वर, वा राम्रो संग, मानिसहरु को भाईचारे प्रेम र सत्य संग मिल्नेछ, र सिद्धान्त र आध्यात्मिक शक्ति को एकता छ कि ईश्वरीय विज्ञान गठन। एक भन्दा बढी मनको कथित अस्तित्व मूर्तिपूजाको आधारभूत त्रुटि थियो। यस त्रुटिले आध्यात्मिक शक्तिको क्षति, जीवनको आत्मिक उपस्थितिलाई हराएको अनन्त सत्यको रूपमा अनन्त सत्यको रूपमा ग्रहण गर्‍यो, र प्रेमको क्षतिलाई अहिलेको जस्तो र सार्वभौमिकको रूपमा ग्रहण गर्‍यो।
ईश्वरीय विज्ञानको बेइमान भएर बोल्नु बेकार हो, जसले सबै विवादास्पद नष्ट गर्दछ, जब तपाईं विज्ञानको वास्तविकता प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि वास्तविकता परमेश्वर, ईश्वरीय सिद्धान्तसँग पूर्ण मेलमिलापमा छ भन्ने कुरामा श का गर्नु मूर्खता हो - यदि विज्ञान, जब यो बुझिन्छ र प्रदर्शन हुन्छ, त्यसले सबै मतभिन्नतालाई नष्ट गर्दछ, किनकि तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ; यो आधार देखि यो राम्रो र यसको मिठो कन्कोर्ड सबै शक्ति छ कि निम्नानुसार।
ग्रहहरूमा मानिसमाथि आफ्नो सृष्टिकर्तामाथि शक्ति छैन, किनकि ईश्वर ब्रह्माण्डमा शासन गर्नुहुन्छ; तर मानिस, परमेश्वरको शक्ति प्रतिबिम्बित, सारा पृथ्वी र यसको सेनाहरु मा प्रभुत्व छ।
ईश्वरीय विज्ञानको सुरूवात बिन्दु भनेको यो हो कि परमेश्वर, आत्मा, सबैमा सर्वत्र हुनुहुन्छ, र त्यहाँ कुनै अर्को सामर्थ्य छैन र दिमाग छैन - कि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, र त्यसैले उहाँ ईश्वरीय सिद्धान्त हुनुहुन्छ।
प्रार्थनाले अस्तित्वको विज्ञानलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, तर यसले हामीलाई यससँग मेल खान्छ। भलाइले सत्यको प्रदर्शन प्राप्त गर्दछ। एउटा अनुरोध जुन परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुनेछ सबै आवश्यक छैन। ईश्वरीय मनसँग बिन्ती गर्ने केवल बानी, एक व्यक्तिले बिन्ती गरे जस्तै, परमेश्वरमाथिको विश्वासलाई मानव परिक्रमा गरिएको रूपमा कायम गर्दछ - त्यो त्रुटि जुन आत्मिक बृद्धिलाई बाधा दिन्छ।
भगवान प्रेम हुनुहुन्छ। के हामी उहाँलाई अरू हुन भन्न सक्छौं? भगवान बुद्धिमत्ता हुनुहुन्छ। के हामी अनन्त मनलाई केहि चीजको बारे थाहा दिन सक्छौं जुन उहाँ पहिले नै बुझ्नुहुन्न? के हामी पूर्णता परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गर्छौं? के हामी खुला हिसाबले अझ बढी बिन्ती गर्छौं, जुन हामीले स्वीकार गरेको भन्दा बढी खन्याईरहेको छ? अज्ञात इच्छाले हामीलाई सबै अस्तित्व र धन्यकोको स्रोत नजिक ल्याउँदछ।
भगवानलाई परमेश्वर सोध्नु व्यर्थको पुनरावृत्ति हो। परमेश्वर "हिजो, र आज र सदाका लागि हुनुहुन्छ।" र जो निर्धक्क भएर सही छ उसले आफ्नो प्रान्तको सम्झना नगरी सही गर्दछ।
यो राम्ररी बुझ्नुपर्दछ कि सबै मानिससँग एक दिमाग, एक परमेश्वर र पिता, एक जीवन, सत्य, र प्रेम हुन्छ। मानवजात अनुपातमा सिद्ध हुन्छ किनकि यो तथ्य स्पष्ट हुँदै जान्छ, युद्ध अन्त्य हुनेछ र मानव सच्चा भाईचारे स्थापना हुनेछ।
"तिमीहरूले मबाहेक अरू कुनै देवता पूज्नु हुँदैन।" (प्रस्थान 20:3.) पहिलो आदेश मेरो मनपर्ने पाठ हो। यसले इसाई विज्ञान प्रदर्शन गर्दछ। यसले परमेश्वर, आत्मा, दिमागको त्रिएकत्वलाई निम्त्याउँछ। यसले मानिसमा अरु कुनै आत्मा वा दिमाग हुँदैन भन्ने कुराले स अनन्त्केत गर्दछ, अनन्त भलाइ, र सबै मानिसमा एक दिमाग हुन्छ। पहिलो आज्ञाको ईश्वरीय सिद्धान्तले अस्तित्वको विज्ञानलाई आधार गर्दछ, जसद्वारा मानिसले स्वास्थ्य, पवित्रता, र अनन्त जीवनको प्रदर्शन गर्दछ। एक अनन्त भगवान, राम्रो, पुरुष र राष्ट्रहरू एकताबद्ध; मानव भाइचाराको गठन; युद्ध समाप्त हुन्छ; धर्मशास्त्रमा लेखिएको छः "आफ्ना छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नुहोस्।" गैरमसीही मूर्तिपूजक र ईसाई मूर्तिपूजा, - सामाजिक, नागरिक, आपराधिक, राजनीतिक, र धार्मिक कोड मा जे गलत छ; लि बराबर्गको बराबरी गर्दछ; मानिसमा श्रापलाई हटाउँदछ, र यसले पाप, दु: ख, सजाय वा नाश गर्न सक्ने केहि पनि छोड्दैन।